Local Celebrity News | M Media Zone
M Media Zone
August 1, 2019 mmediazone 0
အကယ်ဒမီခန့်စည်သူနဲ့ အက်ရှင်မင်းသမီးလေး ယဉ်လတ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ကြည်နူး စရာအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဟာ မကြာခင်မှီ အချိန်းတွင်းမှာပဲ ပရိသတ်တွေ ရှေ့ကိုရောက်ရှိလာတော့ မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် … ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ဦးနဲ့ကလေးရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အသက်ကြီးကြီး ဦးလေးကြီးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သွက်သွက်လက် လက်အရွယ် ကလေးတို့ရဲ့ အချစ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကို ရင်ခုန်ချင်စရာ ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်လို့ […]
July 30, 2019 mmediazone 0
ကဲ မန်းလေးက သွားဆျာဝန်လေးတဲ့ အကောင့်ထဲက သွားနာတဲ့ Bff တွေကို မန်းရှင်း… ဟိန်းဝေယံတဲ့တူတဲ့ မန်းတလေးက သွားဆရာဝန်လေး ဟိန်းဝေယံတဲ့တူတဲ့ မန်းတလေးက သွားဆရာဝန်လေး ဟိန်းဝေယံတဲ့တူတဲ့ မန်းတလေးက သွားဆရာဝန်လေး ဟိန်းဝေယံတဲ့တူတဲ့ မန်းတလေးက သွားဆရာဝန်လေး
ဂူဂျွန်ဖြိုးနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ပျော်တယ်ဆိုတဲ့ နေထက်လင်းရဲ့သား ထက်လင်းအောင်
နေထက်လင်းရဲ့သားချောလေး ထက်လင်းအောင်ဟာဆိုရင် အကယ်ဒမီရွှေကြိုတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး ယောက်ျားပီသတဲ့သွင်ပြင်နဲ့ အပြုံးချိုချိုလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေကအချိန်ိတိုလေးအတွင်းမှာသတိထားမိခဲ့ပြီး အားပေးမှုရခဲ့တာပါ။ လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ထက်လင်းအောင်က မကြာသေးမီက မီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးမှာ အဖေနဲ့မတူလို့ဝမ်းနည်းရကြောင်းနဲ့ မိဘရဲ့လောင်းရိပ်မမိချင်ပဲ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားချင်တယ်လို့ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာလုပ်ရာမှာမိဘအရိပ်ကိုမခိုပဲ တစ်ယောက်တည်းကြိုးစားချင်တယ်လို့ “အခက်အခဲတွေကတော့ အများကြီးပေါ့။ အနုပညာလုပ်ရာမှာအဖေအမေအရ်ိပ်ကိုမခိုပဲတစ်ယောက်တည်းကြိုးစားချင်ပါတယ်။ ဆိုတော့.. ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားရမှာပေါ့။ အရိပ်မခိုချင်ဘူးဆိုတာ ကိုနေထက်လင်းသား မဆုဒါလီသားမဟုတ်ပဲ […]
ကလေး အယောက် (၆၀) ကျော်ကို ကျောင်းထားပေးတာ ၆နှစ်ရှိပြီဆိုတဲ့ မအေးသောင်း
မထင်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ထပွင့်တဲ့ စန်းကြောင့် မအေးသောင်းတစ်ယောက် တစ်ကျော့ပြန် အောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ မာနထောင်လွှားခြင်း မရှိသလို ရိုးရိုးအေးအေးပဲ နေတာများလို့ အနုပညာကြေးတွေကို ဘယ်လိုအသုံးချလဲ သိချင်သူတွေက များလှပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ အဖီးလ် တစ်လိုင်း စာသားလေးတွေ ရေးတတ်တဲ့ အပျိုကြီး အေးသောင်းတစ်ယောက် ဖူးစာရှင်ကရော ဘယ်တော့များမှ မျက်နှာပြမှာလဲ။ […]
ဖိနပ်ချုပ်စားလို့ လူကြားထဲနှိမ်တဲ့သူတွေကြောင့် အနုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ ရှက်မိပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုပါကျဲ
July 29, 2019 mmediazone 0
“မင်း ဖိနပ်တွေ ချုပ်နေလားလို့ တစ်ချို့က ဝေဖန်ကြတယ်… သူတို့ ပြောတာကိုစိတ်မဆိုးပါဘူး… အနုပညာသမား ဖြစ်နေပြီး ဒီလိုကြီး ရှာဖွေစားသောက်နေရတော့ “ကြုံကြိုက်ရင် ထီးလဲ လာပြင် ရပါတယ်။ ဖိနပ်လဲ လာချူပ်လို့ရပါတယ်။စမ်းချောင်းမှာ ဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်။မကြီးကြီးလမ်းမှာပါ” တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၀မ်းနည်းနေတယ်… လူကြားထဲမှာ ပြောခံရရင် ရှက်မိတယ်” လို့ပြောလာတဲ့ […]
အနုပညာကို လုပ်ချင်ပေမယ့် ကမ်းလှမ်းလာမှာကိုပဲ မျှော်လင့်နေရတဲ့ ဟဲဗီးဖြိုး
July 28, 2019 mmediazone 0
ကလေး သရုပ်ဆောင် ဟဲဗီးဖြိုး က အခု လက်ရှိမှာ အသက် ၂၃ အရွယ်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများစွာ လုပ်ခဲ့ပြီ အခုလက်ရှိမှာတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု နည်းပါးနေတာကို တွေ့ရတယ်။ သူ ဘာကြောင့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနည်းပါးလာတဲ့ အပေါ်မှာတော့ ဝါသနာ ပါတဲ့ အနုပညာအလုပ် ကိုဇောက်ချ လုပ်ချင်ပါတယ်။ […]
အသည်းကွဲပြီးလှတာ အွန်စောပဲရှိတယ်လို့မြန်မာမိန်းကလေးတွေကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်း
July 27, 2019 mmediazone 0
ထွန်းထွန်းကတော့ အောင်မြင်နေတဲ့ အဆိုတော်တွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ R&B နဲ့ Hip Hop အမျိုးအစားတွေကို သီဆိုတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ကျရာကာရိုက်တာပိုင်းကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ပထမဆုံး အကောင်ဆုံးအကယ်ဒမီ ဇာတ်ပို့ဆုကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်းဟာဆိုရင် တစ်နေ့တာအဖြစ်အပျက်တွေကို လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြလေ့ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ အသည်းကွဲပြီးလှတာ အွန်စောသာ ဖြစ်ကြောင်း […]
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးတွေကို သူ့အခွေလေးစမ်းဖွင့်ပြဖို့ လိုက်တောင်းပန်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်…
July 25, 2019 mmediazone 0
စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့သူများဖတ်ကြည့်ပါ။ တခါတုန်းက မျိုးကြီးဆိုတာ … တခါက …. တောင်ဥက္ကလာ ကားလမ်းမ တစ်ခုမှာ ရှိတဲ့ လူငယ်တော်တော်များများ ထိုင်သော နေရာတစ်နေရာကို ဦးထုပ်ခပ်ငိုက်ငိုက် ဆောင်းထားပြီး ဂျင်းအကျီင်္ဝတ်လူနှစ်ယောက် ဝင်လာတယ်.သူတို့ မျက်နှာတွေကို သေချာစွာ မမြင်ရ… ဒါကြောင့် ဘယ်သူတွေမှန်းလည်းမသိ ဘယ်သူမှလည်း သူတို့ကို အလေးထား […]
နိုင်ငံခြားသားတွေအရှေ့မှာ မြန်မာအကကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာကပြနိုင်ခဲ့တဲ့ အလှမယ်လေးIsabell ရဲ့ဗီဒီယို
July 24, 2019 mmediazone 0
မြန်မာကိုယ်စားပြု အလှမယ်လေး Isabell ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ Suzhou မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ “C Plan Kids Supermodel 2019” ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ First Runner Up ဆုကြီးကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Isabell လေးဟာဆိုရင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသက် (၉) နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတာ […]
FACEAPP သုံးတဲ့ အန္တရာယ်ကို လူအများသိအောင် သတိပေးလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် အိတုံ
လတ်တလောမှာတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ လူတွေ အသုံးများနေတဲ့ FaceApp ကတော့ ကိုယ်အသက်ကြီးသွားရင်ဖြစ်လာမယ့်ပုံကို ဖေါ်ပြပေးနိုင်တဲ့ effect ပါရှိတာကြောင့် ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အိတုံကတော့ အဲဒီ application နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသုံးပြုနေကြသူတွေသိစေဖို့အတွက် အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဝေမျှပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အိတုံကတော့ “အခုတော်တော်များများဆော့နေကြတဲ့ အသက်ကြီးရင် ဘယ်လိုရုပ်ထွက်သလဲဆိုတဲ့ faceapp ကို […]
ချစ်နေတဲ့ သူက အနုပညာလောကထဲကပဲဆိုတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ
July 23, 2019 mmediazone 0
ထူးခြားတဲ့သီချင်းတွေ ထူးခြားတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပုံတေတွကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အမြင်အာရုံဖမ်းစားထားနိုင်တဲ့ တေးသံရှင် ကျော်ကျော်နန္ဒကတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ အရမ်းကို လူပြောသူပြောများနေတဲ့ ဆယ်လီတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း ကချင်ရိုးရာဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ပြီး ကချင်ဘက်ကနေ သတိပေးထားရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဒီလိုတွေဝတ်နေပေမယ့် သူရဲ့ ဝါသနာက ဥကဒေနဲ့ အနုပညာဖြစ်ပြီး ဥပဒေစာအုပ်တစ်ခန်းအိမ်မှာ ထားရှိပြီး ဖတ်ဖြစ်တယ်လို့ […]
ယောက်ျားတွေက ဆင်းရဲသွားရင် စစ်မှန်တဲ့ အချစ်ကိုသိသွားတယ် ဆိုတဲ့ ကောင်းကောင်းရဲ့ မိန်းမ
July 22, 2019 mmediazone 0
အသံအားကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းတွေသီဆိုလေ့ရှိတဲ့ အဆိုတော်ကောင်းကောင်းဟာ သူချစ်ရတဲ့ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီးအေးချမ်းစွာ နေထိုင်နေပါတယ်။ သူက အလွမ်းအဆွေးသီချင်းတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲကိုထိုးဝင်အောင် သီဆိုဖျော်ဖြေနိုင်တာကြောင့် အားလုံးက နှစ်သက်သဘောကြကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဇနီးချောလေး Xiao Mei Mei နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သလေးတစ်ယောက်ကိုလဲ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ Xiao […]
ချွဲလို့ရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ မိုရီဆာကီဝင်း
ကောင်မလေးတွေအသည်းအသန်ကြွေနေကြတဲ့ အဝင်းဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်သားဂျပန်အဆိုတော်လေးအဝင်းဟာဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သလို ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေလည်းရိုက်ကူးထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေများတဲ့ကြားက မြန်မာနိုင်ငံလာလာလည်ပြီး မြန်မာမှာ အလုပ်လုပ်ရတာပျော်တဲ့အဝင်းက မကြာသေးမီက 8days TV နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပရိသတ်တွေသိချင်နေကြတဲ့အချစ်ရေးအကြောင်းနဲ့ လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ အဝင်းက လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းကို “အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုလာတော့ ရက်တွေက အကုန် schedule က […]
ဝေဠုကျော်ကို ခုထိ ချစ်နေဆဲပါဆိုတဲ့ အလှမယ် သင်းသင်း
July 18, 2019 mmediazone 0
ကာမလိမ်လည်မှုနဲ့ ဝေဠုကျော်ကို တရားစွဲပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဟိုးလေးတစ်ကျော် ဖြစ်သွားစေသူက အလှမယ် သင်းသင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်းသင်းဘက်က အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ ရှိသလို ဝိုင်းပြီး ရှုတ်ချတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း ရှိနေဆဲပါ။ အမှု ရင်ဆိုင်နေဆဲ ကာလ ဖြစ်ပေမဲ့ ဝေဠုကျော်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခံစားချက် အငွေ့အသက်လေးကိုတော့ […]
ချစ်သူနဲ့ အဆင့်ကျော်ပြီး လေးနှစ်လုံးအတူတူနေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
ပ ရိ သတ်တွေ လက်ခံအားပေးထားတဲ့ အဆိုတော် အေသင်ချိုဆွေကတော့ လက်ရှိချိန်မှာ အချစ်ရေးမှာကံအကြောင်းမလှခဲ့တာကြောင့် Single Mother တယောက် အနေနဲ့ ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အေသင်ချိုဆွေကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာ Single Mother တွေကိုလည်း အားပေးစကားတွေ များစွာပြောကြားခဲ့ပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်လိုမျိုး စိတ်ဓါတ်ပိုင်းမှာ ပြင်ဆင်နေရလည်းဆိုတာတွေကို […]
July 17, 2019 mmediazone 0
မိန်းခလေးအားပွေ့ကာ ကယ်တင်နေပုံအား ဇနီးဖြစ်သူမှ TV မှတွေ့မြင်သွားသောကြောင့် ထိုရဲ မိန်းမမှ ငြုပ်ကျည့်ပွေ့ဖြင့် ထုလိုက်သောကြောင့် ခေါင်းကွဲ
တကယ်မချစ်ပဲ သင့်အပေါ်လိင်ကိစ္စကြောင့်သာ တွဲနေတဲ့သူမှန်းသိနိုင်မယ့် အချက်(၅)ချက် အရေးကြီးတယ်
M Media Zone is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.